‘द भ्वाईस अफ नेपाल’को ब्याटल राउण्डमा को-को परे ? कुन कोचको टिममा कति जना ? विस्तृतमा हेर्नुस् - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०७, २०७५ समय: १३:०९:५६
इटहरी/ सर्बाधिक चर्चामा रहेको विश्वको नम्बर एक गायन रियालिलिटी शो ‘द भ्वाईस’को नेपाली फ्रेन्चाइज ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ ए एन सी प्रोडक्सनको उत्पादनमा हरेक सनिवार र आईतबार राति ९ बजेबाट कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत प्रशारण भैरहेको छ । यस संगै शनिबार प्रशारण गरिएको द भ्वाइस अफ नेपालको ९ औ शृंखला बाट ब्लाइण्ड अडिसन समाप्त भएको छ ।
द भ्वाइस अफ नेपालको ब्याटल राउण्डको लागि तयार चारै जना कोचहरु बरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, सनुप पौडेल र अभया सुब्बा सबैले आआफ्नो टिम बनाइसकेका छन् । सर्वाधिक धेरै सम्भावना सहितका आवाजहरु सङ्गालेर कोच प्रमोद खरेल, सनुप र अभया संग समान ११ जना प्रतिस्पर्धी रहेका छन् । त्यस्तै कोच दिप संग १० जना प्रतिस्पर्धी मात्र रहेका छन् ।
यस संगै दिप श्रेष्ठको टिममा एन्नि, बिबेक, नबराज, जनक, सन्दिप, दिनेश, सुजाता, अंकित, बिबेक र राजु गरि जम्मा १० जना प्रतिस्पर्धी रहेका छन् । त्यस्तै कोच सनुपको टिममा अप्सरा,आशिष, सन्तोष, राजेश, सप्तक, बिध्या, निशान्त, दिपक, शैलु, सुनन्दा र रित राना गरि ११ जना रहेका छन् । सर्बाधिक रुचाइएका कोच प्रमोद खरेल संग भने ९ औ अडिसन भन्दा अगाडी नै सुशील, सिडि बिजय, रुद्र, सुरेखा, तेजेन्द्र, स्वइच्छा, सुरज, वर्ता, राजु, योगेन्द्र र सुगमा गरि ११ जना पुगेका थिए ।
महिला कोच अभया पनि समान ११ जना अनु, श्रिजय, आश्रा, प्रितेश, शनिध्या, सुवास, कुशल, श्रेया, सन्तोष, बिबेक र सालिना लाइ आफ्नो टीममा पार्न सफल रहिन् । कोच सनुप, अभाया र दिपको टिममा समान ९ जना प्रतिस्पर्धी रहेका थिए भने प्रमोदले आफ्नो टिममा ११ जनालाई सुरक्षित गरिसकेका थिए । अन्तिम ब्लाइण्ड अडिसनमा कोच सनुप र अभयाले २ जना र दीपले १ जनालाई आफ्नो टिममा ल्याउन सफल भएका छन् ।
अब १० औ एपिसोडमा भने ड्रिम टिमको छनोट गर्दै ब्याटल राउण्डको लागि तयारि गरिने कार्यक्रममा उद्घोष गरिएको छ । ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’को विजेतालाई ‘भ्वाईस अफ नेशन’ घोषणा गरिनेछ । विजेताले पच्चीस लाख नगद, नयाँ कार, बीस लाख बराबरको भिडियो एल्बमको समझौता तथा वर्ल्ड टुरको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।